တဆက်တည်းဖြစ်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ ထိစပ်မနေသော ဧရိယာများပြင်ဆင်
တဆက်တည်းဖြစ်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပြည်နယ်များပြင်ဆင်
↑ Random House (1991). Random House Webster's College Dictionary. New York: Random House. ISBN 0-679-40110-5။
↑ HowStuffWorks "Geography of the United States - Geography"။ Geography.howstuffworks.com (March 30, 2008)။ October 29, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook။ cia.gov။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တဆက်တည်းဖြစ်သော_အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု&oldid=379474" မှ ရယူရန်
၂၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၇၊ ၀၇:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၇၊ ၀၇:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။